आर्इफोन भेट्टाए तपाइँ के गर्नुहुन्छ ?
पहिला यो तलको भिडियो हेर्नुस् । यहाँ भएको कुराकानीलार्इ ध्यान दिएर सुन्नुस् अनि तलको कमेन्ट बक्समा हजुरको प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सनुस् कि मान्छेहरू यति बिधि इमान्दार पनि भेट्टिन्छन त ?
यि भिडियोमा देखिएका ब्यक्तिको नाम थियोड्रस हो । उनी मसँगै एउटै भवनमा भाडामा बस्छन् । मेरो ख्यालमा यिनी शरणार्थीका रूपमा नर्वे आएका हुन् । र, अहिले यिनीसँग नर्वेमा बस्ने स्थार्इ अनुमतिपत्र छ । हिजो आर्इतबार (जनवरी १६) का दिन यिनले मेरो ढोका ढक्ढकाए । मलार्इ लाग्यो - सायद पुस्तकालयबाट आफूले हेर्नको लागि ल्याएका केहि भिडियोहरू मलार्इ दिनका लागि यिनी मेरो कोठामा आएका हुन । प्रायः सधैं गर्छन् पनि यिनि यस्तै । कि, आफूसँग भएका चिजबिजहरू सरसापट गर्नमा यिनी कुनैप्रकारको दुःख मान्दैनन् ।
तर यो पाली कोठामा छिर्ने बित्तिकै यिनले एउटा आइफोन देखाउँदै भने - यि मैले यो भेट्टाए नि ! मैले उनको हातबाट हतपत लिदैँ वल्टार्इ पल्टार्इ हेरेँ, त्यसमा केहि खराबि थिएन । त्यो लोभलाग्दो आर्इफोन थियो । दुवैले मिलेर त्यहाँ भित्रका केहि फोटाहरू हेर्यौ । र, अनुमान पनि गर्यौ त्यो सायद २५/२६ वर्ष उमेरको युवाको हुनुपर्छ । मलार्इ आईफोन सारै मन पर्यो र मजाकको शैलिमा (सस्तोमा पाए किन्ने बिचारले) आईफोन मलार्इ बेच्नका लागि अनुरोध गर्न बिर्सिन् । तर मैले ३००० क्रोनर नगद दिदाँ पनि उनले त्यो आईफोन दिन मानेनन् । बरू उनिसँगै त्यो आईफोन बुझाउनका लागि प्रहरीकोमा जान अनुरोध गरे । म त तिन छक्क !
उनको जिकिर थियो - आर्इफोनमा रहेका दस्तावेजहरू उक्त आर्इफोन हराउने ब्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित महत्वपुर्ण चिजहरू हुने भएकाले आफूले त्यो आर्इफोन हरहालतमा प्रहरिकोमा बुझाउनु पर्छ । यो भिडियो खिचिसके पछि उनले त्यही आईफोनमा सुरक्षित एउटा नम्बरमा फोन गरे र उक्त आईफोन आफूले भेटेकाले सम्बन्धित ब्यक्तिलार्इ खबर गरिदिन अनुरोध गर्दै उक्त आर्इफोन आफूले प्रहरीकोमा बुझाउने जानकारी गराए ।
मलार्इ अचम्म लाग्यो, साँच्चि मान्छेहरू पनि अनौठा अनौठा भेट्टिदा रैछन् गाँठे ! साथि थियोड्रसको कदमलार्इ उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूलार्इ मेरो प्रश्न - सायद त्यो आर्इफोन यहाँले भेट्टाउनु भएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो नी ? सायद मैले .............!
Location: Jonas Lies gate, 9009 Tromsø, Norway